Graphic designer တဈယောကျဖွဈလာဖို့ ဘာတှစေတငျလလေ့ာထားရမလဲ?
ပထမဦးစှာ သငျက ဘယျလို designer မြိုးဖွဈခငျြတာလဲဆိုတာ အရငျဆုံးစဉျးစားကွညျ့ဖို့လိုအပျပါတယျ။
တဈခြို့က digital painting , layout design…
စတဲ့ ဒီဇိုငျးတှကေိုရေးဆှဲရတာဝါသနာပါပွီး တဈခြို့ကတော့ logo design, branding …အစရှိတဲ့ illustration ဒီဇိုငျးတှကေိုဖနျတီးခငျြကွတယျ။ သငျကဘယျအရာကို ပိုဝါသနာပါလဲဆိုတာရှငျးရှငျးလငျးလငျးသိရငျ လလေ့ာရာမှာ ပိုမိုလှယျကူပါတယျ။
Graphic designer တဈယောကျအတှကျ အသုံးပွုရမယျ့ softwares တှကေို သိထားတတျထား ဖို့ကလဲအဓိကအရေးကွီးပါတယျ။
Adobe Photoshop ,Adobe Illustrator နဲ့ Adobe InDesign အစရှိတဲ့ graphic software တှကေို ကြှမျးကငျြစှာအသုံးပွုတတျရပါမယျ ။ ဒါ့အပွငျ ကိုယျဖနျတီးမဲ့ artwork တှနေဲ့ ကိုကျညီမယျ့ software တှကေိုလညျး ရှေးခယျြအသုံးပွုတတျရပါမယျ။
(ဥပမာ- logo ဒီဇိုငျးတှရေေးဆှဲမယျဆိုရငျ Adobe Illustrator ကိုအသုံးပွုရပါမယျ)
Graphic design တှကေို ဖနျတီးမယျဆိုရငျ Graphic design ရဲ့အခွခေံဖွဈတဲ့ Design Elements and Principles ကိုလညျး နားလညျသဘောပေါကျထားဖို့လိုအပျပါတယျ။
Point, Line, Shape, Form, Value, Color, Texture…အစရှိတဲ့ Design Elements ကိုသိရှိဖို့လိုအပျသလို design တဈခုမှာလိုကျနာရမယျ့အခကျြတှဖွေဈတဲ့
Balance, Proximity, Align, Direction, Space, Size, Unity, Harmony အစရှိတဲ့ design principles ကို သိရှိနားလညျထားရပါမယျ။
Photoshop ,Illustrator သုံးတတျရုံနဲ့graphic designer ဖွဈပွီလို့ပွောလို့မရသေးပါဘူး။designer တဈယောကျဖွဈဖို့ သကျဆိုငျရာ tools/software တှကေိုကြှမျးကငျြနိုငျနငျးဖို့လိုအပျသလို
graphic design တှေ ဖနျတီးရာမှာအဓိကအရေးပါတဲ့ Typography, color နဲ့ design theory တှကေိုလညျးကြှမျးကငျြအောငျလလေ့ာထားဖို့လိုအပျပါတယျ။
(4) Self_Study or #Graphic_Design_School is Right for You
Graphic design ကိုလလေ့ာရမှာလညျး online training ,self-learning (သို့မဟုတျ) Design training class အစသဖွငျ့ ကိုယျနဲ့ကိုကျညီမယျ့နညျးလမျး တှကေိုရှေးခယျြလို့ရပါတယျ။
သငျက အခုမှ စပွီး design ကိုစတငျလလေ့ာမှာဆိုရငျ တော့ online ကနေ Design tools တှေ theory တှကေိုလလေ့ာရာမှာအခကျအခဲရှိနိုငျပါတယျ။
Design training class တှမှောတော့ tools , theory တှကေိုသငျကွားပေးတာအပွငျ designs knowledge ,concept thinking, networking တို့ကိုပါ ရရှိနိုငျပါတယျ။
သငျတနျးရှေးခယျြရာမှာလညျး သငျ့ရဲ့လိုအပျခကျြနဲ့ကိုကျညီတဲ့ သငျတနျးကို သခြောရှေးခယျြတတျရောကျဖို့လဲလိုအပျပါတယျ။
ဒီအခကျြတှကေတော့သငျ့ကို graphic design ကိုလလေ့ာရာမှာ အကူအညီပေးနိုငျမယျ့နညျးလမျးတှပေဲဖွဈပါတယျ။Graphic designer တဈယောကျဖွဈလာဖို့ ဘာတှစေတငျလလေ့ာထားရမလဲ?
Graphic Design သငျကွားပေးသော ဆရာမြား >>>> https://bit.ly/2mZLU7p
Graphic designer တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ ဘာတွေစတင်လေ့လာထားရမလဲ?
ပထမဦးစွာ သင်က ဘယ်လို designer မျိုးဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတာ အရင်ဆုံးစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
တစ်ချို့က digital painting , layout design…
စတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကိုရေးဆွဲရတာဝါသနာပါပြီး တစ်ချို့ကတော့ logo design, branding …အစရှိတဲ့ illustration ဒီဇိုင်းတွေကိုဖန်တီးချင်ကြတယ်။ သင်ကဘယ်အရာကို ပိုဝါသနာပါလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရင် လေ့လာရာမှာ ပိုမိုလွယ်ကူပါတယ်။
Graphic designer တစ်ယောက်အတွက် အသုံးပြုရမယ့် softwares တွေကို သိထားတတ်ထား ဖို့ကလဲအဓိကအရေးကြီးပါတယ်။
Adobe Photoshop ,Adobe Illustrator နဲ့ Adobe InDesign အစရှိတဲ့ graphic software တွေကို ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်ရပါမယ် ။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်ဖန်တီးမဲ့ artwork တွေနဲ့ ကိုက်ညီမယ့် software တွေကိုလည်း ရွေးချယ်အသုံးပြုတတ်ရပါမယ်။
(ဥပမာ- logo ဒီဇိုင်းတွေရေးဆွဲမယ်ဆိုရင် Adobe Illustrator ကိုအသုံးပြုရပါမယ်)
Graphic design တွေကို ဖန်တီးမယ်ဆိုရင် Graphic design ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ Design Elements and Principles ကိုလည်း နားလည်သဘောပေါက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Point, Line, Shape, Form, Value, Color, Texture…အစရှိတဲ့ Design Elements ကိုသိရှိဖို့လိုအပ်သလို design တစ်ခုမှာလိုက်နာရမယ့်အချက်တွေဖြစ်တဲ့
Balance, Proximity, Align, Direction, Space, Size, Unity, Harmony အစရှိတဲ့ design principles ကို သိရှိနားလည်ထားရပါမယ်။
Photoshop ,Illustrator သုံးတတ်ရုံနဲ့graphic designer ဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့မရသေးပါဘူး။designer တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာ tools/software တွေကိုကျွမ်းကျင်နိုင်နင်းဖို့လိုအပ်သလို
graphic design တွေ ဖန်တီးရာမှာအဓိကအရေးပါတဲ့ Typography, color နဲ့ design theory တွေကိုလည်းကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Graphic design ကိုလေ့လာရမှာလည်း online training ,self-learning (သို့မဟုတ်) Design training class အစသဖြင့် ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီမယ့်နည်းလမ်း တွေကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။
သင်က အခုမှ စပြီး design ကိုစတင်လေ့လာမှာဆိုရင် တော့ online ကနေ Design tools တွေ theory တွေကိုလေ့လာရာမှာအခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်။
Design training class တွေမှာတော့ tools , theory တွေကိုသင်ကြားပေးတာအပြင် designs knowledge ,concept thinking, networking တို့ကိုပါ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
သင်တန်းရွေးချယ်ရာမှာလည်း သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ သင်တန်းကို သေချာရွေးချယ်တတ်ရောက်ဖို့လဲလိုအပ်ပါတယ်။
ဒီအချက်တွေကတော့သင့်ကို graphic design ကိုလေ့လာရာမှာ အကူအညီပေးနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။Graphic designer တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ ဘာတွေစတင်လေ့လာထားရမလဲ?
Graphic Design သင်ကြားပေးသော ဆရာများ >>>> https://bit.ly/2mZLU7p
Read times Last modified on Tuesday, 24 December 2019 11:38